Nagarik News - शिकारी अप्सरा
होमपेज / शुक्रबार / शिकारी अप्सरा
शिकारी अप्सरा	25 Apr 2013 बिहीबार १२ बैशाख, २०७०
Be the first to comment! 12345 (8 votes)
पुरुषलाई बलात्कार गर्ने महिला ग्याङस्टरको कथा उठाएपछि अचेल फिल्म 'ब्ल्याक नाइट'को राम्रै चर्चा भइरहेको छ। यसका पोस्टर र केही गीत सार्वजनिक भएपछि 'बास्न लागेको भाले शिकार' गर्ने 'पोथी'हरू पनि दर्शकको नजरमा परेका छन्। तीमध्ये एक हुन्, अप्सरा घिमिरे। यसअघि शुक्रवार साप्ताहिकका लागि रातो पहिरनमा कामुक अदा छरपस्टै हुने तस्बिर खिचाएर दर्शकको मन तातो बनाइसकेकी थिइन् उनले। त्यसैमाथि केही समअघिमात्रै सार्वजनिक भएको उनी अभिनीत पहिलो फिल्म 'ब्ल्याक नाइट'को 'चोलीको नाप हात न बित्ता'मा त्यस्तै पहिरनमा शिकारी नजरियामै नाचेपछि उनीमाथि झन् धेरैले नजर लगाएको हुनुपर्छ। फिल्ममा पनि उनको काम गतिलै रहेछ भने त यी पृथ्वीकी अप्सरालाई मायाजालमा फसाउन चाहने थुप्रै हुनेछन्। Tweet Leaveacomment Message *
'संगीतसँग खेलबाड भइरहेको छ'कुनै बेला शम्भुजीत बाँस्कोटा कति ठूला स्टार थिए भने उनको संगीतबिना नेपाली फिल्म बनाउने कल्पनासम्म गरिँदैनथ्यो। तीन सयभन्दा बढी फिल्म र १८ सयभन्दा बढी गीतमा संगीत दिएका छन् उनले। आजका...	निबन्ध : झेल्ला रेफ्रीब्राजिलले हार्दा एक किशोरीले आत्महत्या गरिन्। नेमार घाइते हुँदा सयौँ नौजवानलाई नराम्ररी दुख्यो। युरोपको जर्मनी र मध्य अमेरिकी अर्जेन्टिनासँग एसियालीको कुनै नसनातो र सम्बन्ध थिएन। तैपनि, मध्यरात–बिरात जाग्यौँ। भोक र...	बिहेपछिकै सेक्स उत्तम : सुपी थापा, कलाकारतपाईंको बुझाइमा सेक्स?शारीरिक आवश्यकता।	देखाएकै भरमा कहाँ चलिन्छ र?प्लस टू सकाएर बसेकी थिइन्, सबिना कार्की। सिन्धुलीमा जन्मेहुर्केकी सबिना काठमाडौँ आएको केही वर्ष भइसकेको थियो। स्नातक पढ्न सुरु गर्दा उनले आफूमा हिरोइन बन्नुपर्ने केही आधार पनि विकास गरेकी थिइन्।...	खरो खरेलनेपाली जनताका नजरमा प्रहरीको छवि खासै गतिलो छैन। यस्तो कटु सत्यका बीच गुलाब दिवसका दिन युवायुवतीले एक प्रहरी अधिकृतलाई १५ सय गुलाब दिए। उनी थिए, एसएसपी रमेश खरेल। यत्तिका तन्नेरीले...	'जँड्याहा रोनाल्डो'स्पेनको शीर्ष लिग फुटबल टुर्नामेन्ट ला लिगा को हिंसाविरोधी समितिले लेवान्टे र बार्सिलोनाविरुद्ध छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। रियल म्याड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कथित रूपले अपमानित गर्ने उद्देश्यले बनेको...	गर्भसँग खेलाँचीजोसमा होस नपुर्यारएपछि बित्यास पर्छ नै। एकछिनको देहसुखले प्रेमिका गर्भवती हुन पुग्छिन्। समाज, लोकलाज र नैतिकताको भयले उनी गर्भपतन गराउन पुग्छिन्। नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको ११ वर्ष भयो। शहरी...	गुलाब अभियन्ताको बयानडा. सुशील कोइराला आफूलाई 'सदाबहार आन्दोलनकारी'का रूपमा चिनाउन चाहन्छन्। विभिन्न समयमा गुलाबको सहारामा विभिन्न मुद्दामा आन्दोलन चलाउने गरेका उनलाई धेरैले 'गुलाब डाक्टर' भनेर चिन्छन्। गुलाबकै माध्यमबाट मान्छेको मन बदल्न सकिने...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...